ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချနေသူများအတွက် Do & Don’t နေ့လယ်စာ – Good Health Journal
နေ့လယ်စားသုံးတဲ့အခါမှာ လူအများပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အမှားတစ်ခုက အလွန်ဆာမှသာ ထမင်းစားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါက ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အမူအကျင့်ပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်များများ နေ့လယ်စာအတွက် အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး စားသင့်ပါတယ်။
လူအများစုက နေ့လယ်စာကိုအပြင် ဆိုင်က ထမင်းဟင်းကို ၀ယ်စားလေ့ရှိပါတယ်။ ထမင်းဆိုင်က အစားအစာတွေမှာ အချိုမှုန့်တွေ အသုံးပြုမှုများပြီး ဆီများများ အသုံးပြုထားတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်များများ မိမိအိမ်က ထမင်းဘူးယူဆောင်လာပြီး စားပါ။
အဆာလွန်မှ ထမင်းစားတတ်သူ တွေဟာ ထမင်းစားတာလည်း မြန်တတ်ပါတယ်။ ထမင်းစားတာ မြန်လွန်းတာကြောင့် ၀မ်းဗိုက်ပြည့်တင်းကြောင်း ဦးနှောက်ကို အချက်ပြမှု နှောင့်နှေးသွားကာ အစာ ပိုမိုစားမိတတ်ပါတယ်။
နေ့လယ်စာကို ထမင်းပါဝင်အောင် စားပါ
ဦးနှောက်တက်ကြွမှုရှိဖို့နဲ့ စွမ်းအင် မြင့်မားစွာ ရရှိစေဖို့ နေ့လယ်စာကို ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်အောင် စားပေးရပါမယ်။
နေ့လယ်စာကို ပရိုတင်းပါဝင်အောင် စားပါမှ ၀မ်းဗိုက်ပြည့်တင်းမှုရနိုင်ပါတယ်။ ပရိုတင်းပါဝင်မှု နည်းတဲ့ အစာစားသုံးရင် ခဏခဏဗိုက်ဆာပြီး အချိုစာတွေကို သရေစာအဖြစ် စားသုံးမိတတ်ပါတယ်။
သင်စားတဲ့ နေ့လယ်စာမှာ အမျှင်ဓာတ်ရှစ်ဂရမ်လောက် အနည်းဆုံးပါဝင် ရပါမယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အဆီလည်းပါဝင်ပါစေ
ထမင်းဘူးထည့်ဖို့ ဟင်းချက်ရာမှာ မြေပဲဆီစစ်စစ်ကို အသုံးပြုပါ။ စားအုန်းဆီ ဒါမှမဟုတ် ထပ်ပြန်ကြော်ဆီတွေကို အသုံးမပြုပါနဲ့။
Good Health Journal 638
Categories:	Diet	/ No Responses / by Good Health Journal August 11, 2017
ဒီရက်ပိုင်း ဝိတ်ချချင်တဲ့ သူတွေ များလာတာအမျှ social media...
Diet, Nutrition, Weight Loss ... , Read More
Article, Diet, Uncategorized ... , Read More
Whey ပရိုတင်းဆိုတာဘာလဲ Whey ပရိုတင်းဆိုတာ ချိစ်၊...
Article, Beauty, Diet ... , Nutrition	Read More
Diet လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ တော်တော်များများက...
1-3 ပေါင် 2. 4-9 ပေါင် 3. 10-15 ပေါင် 4. 15 ပေါင် နှင့်...